Izindaba - Izici nezindinganiso zomshini wemaskhi omise okwenhlanzi
Isifihla-buso senhlanzi kufanele sihlangabezane ne-EU en149: 2001 P3 standard. Kusetshenziswa ikakhulukazi ukuvimbela uthuli oluhle kakhulu lwezimboni nentuthu yensimbi ngesikhathi sokushisela. Ngaphezu kwe-99% yazo inokusebenza kahle kokuhlunga, okulungele indawo emanzi futhi eshisayo noma ukugqoka ukuvikelwa isikhathi eside; ilungele ukuvikelwa othulini ekwakhiweni, emayini yamatshe, ezindwangu, ekugayeni, ekubunjweni kwensimbi, ekwenziweni kwemithi, ngogesi, ekwenziweni kwemithi, ukucutshungulwa kwempahla nokugaya nezinye izimboni. Futhi kunomphumela omuhle wokuvikela uthuli esivunguvungwini sesihlabathi.
Umshini we-Bangyin mechanical fish type mask umshini ozenzakalelayo wokugoqa ukukhiqizwa komzimba kwemaski. Isebenzisa ubuchwepheshe be-ultrasonic ukubopha izingqimba ezingu-3-5 zendwangu ye-PP engeyona ephothiwe, izinto ezenziwe nge-carbon kanye nezinto zokuhlunga, futhi isika umzimba wokugoqa imaski. Ngokuya ngezinto zokusetshenziswa ezahlukahlukene ezisetshenzisiwe, izifihla-buso ezikhiqizwayo nazo zingahlangabezana nezindinganiso ezahlukahlukene ezifana ne-ffp1, FFP2, N95, njll. Ibhande lendlebe liyindwangu enganwebeki enganwebeki, eyenza izindlebe zalowo ozigqokile zikhululeke futhi zingabi nengcindezi. Isendlalelo sendwangu yokuhlunga yesifihla-buso sinomphumela omuhle wokuhlunga, ofanelana kahle nokuma kobuso base-Asia, futhi ungasetshenziswa ekwakhiweni, ezimayini nakwezinye izimboni zokungcola okuphezulu.
Imisebenzi kanye nezici zomshini wemaski wezinhlanzi
1. Ingacubungula ukugoqa umzimba wesifi njengohlobo lwenhlanzi ukugoqa umshini wesifi, ongacutshungulwa ngasikhathi sinye.
5. I-Aluminium alloy isetshenziswa kuwo wonke umshini, omuhle futhi oqinile ngaphandle kokugqwala.
6. Ukudla okuthuthukile nedivayisi yokwamukela.
7. Ukuzinza okuphezulu nezinga lokwehluleka okuphansi.
ir filter mask, noma umane uhlunge imaski. Umgomo wawo osebenzayo wukwenza umoya oqukethe izinto eziyingozi uhlungwe futhi uhlanzwe ngezinto zokuhlunga zesifihla-buso, bese uhogela.
Ukuphefumula kohlobo lokunikezwa komoya kubhekisa kumthombo womoya ohlanzekile ohlukaniswe nezinto eziyingozi, othunyelwa ebusweni bomuntu ngokuphefumula nge-catheter ngesenzo samandla esifana ne-air compressor, i-compressed gas cylinder device, njll.
Izihlungi zohlobo lokuhlunga zisetshenziswa kakhulu emsebenzini wansuku zonke. Izindlela zokukhetha nezimo zokusetshenziswa kwalezi zimaski zichazwe ngokuningiliziwe ngezansi. Isakhiwo semaski yesihlungi kufanele sehlukaniswe izingxenye ezimbili. Enye ingumzimba oyinhloko wesifihla-buso, ongaqondakala kalula njengohlaka lwesifihla-buso; enye ingxenye yokuhlunga, kufaka phakathi ukotini wokuhlunga wokuvikela uthuli nebhokisi lokuhlunga lamakhemikhali le-anti-virus. Ngakho-ke, ekukhetheni nasekusebenziseni imaski yokuhlunga, eminye imikhiqizo yeGuangjia ikunikeza okulandelayo okulula, okungukuthi, ungasebenzisa umzimba ofanayo womaski, futhi lapho udinga ukufakazela uthuli endaweni yokusebenza yothuli, ungafaka ukotini wokuhlunga ohambisanayo, ukuze ukwazi ukugqoka imaski yothuli; lapho udinga ukwenza ukuvimbela igesi endaweni enobuthi, shintsha ukotini wokuhlunga, nedivayisi nayo Ibhokisi lokuhlunga lamakhemikhali elihambisanayo, ngakho-ke liba yisifihla-buso segesi, noma ngokwezidingo zomsebenzi wakho, ukukunikeza inhlanganisela eyengeziwe
Ukwethulwa okufushane kwento yokuhlunga yemaski
Izinto zokuhlunga zobuso bokuzivikela zihlukaniswe kakhulu ngezigaba ezimbili, okungukuthi ukufakazela uthuli kanye ne-anti-toxic. Umsebenzi wabo ukukhangisa ama-aerosol ayingozi, kufaka phakathi uthuli, intuthu, amathonsi enkungu, amagesi anobuthi nemiphunga enobuthi, ngezinto zokuhlunga, ukuvimba ukuthi bangaphefumulelwa.
Ukusetshenziswa kwamamaski avamile, amasiki kufanele kube usayizi ofanele, ukugqoka indlela kufanele kube okulungile, amaski azosebenza kahle. Amaski athengiswa emakethe ngokuvamile ahlukaniswe aba ngamaqhuqhuva futhi amise okwenkomishi. Imaski engunxande kufanele okungenani ibe nezendlalelo ezintathu zesakhiwo sephepha ukuze zibe nomphumela wokuvikela. Umsebenzisi kufanele acindezele ucingo kusifihla kubuso bekhala, bese esakaza imaski yonke eceleni kwebhuloho lekhala, ukuze adlale indima ephumelelayo. Izingane zingagqoka izifihla-buso ezingunxande, ngoba ayinakho ukuma okungaguquki, uma ziboshwe kahle, zingasondela ebusweni bengane. Isifihla-buso esimise okwenkomishi kufanele siqinisekiswe ukuthi ukuminyana kwesifihla ngokwanele ngemuva kokunamathiselwa ebusweni, ukuze umoya osemoyeni ungaphumi ukuze usebenze kahle. Uma ugqoke imaski emise okwekomishi, vala imaski ngezandla zombili bese uzama ukushaya. Bheka ukuthi kukhona yini ukuvuza komoya onqenqemeni lwesifihla-buso. Uma imaski ingaqinile, kufanele ulungise indawo ngaphambi kokuyigqoka.
Ngidinga nini ukushintsha imaski
1. Isifihla-buso singcolisiwe, njengamabala egazi noma amaconsi
2. Umsebenzisi wezwa ukuthi ukumelana nokuphefumula kwanda. Uthuli wokuhlunga ubufakazi bothuli: lapho imaski ihambisana kahle nobuso bomsebenzisi, lapho umsebenzisi ezwa ukumelana okukhulu nokuphefumula, kusho ukuthi ukotini wokuhlunga ugcwele izinhlayiya zothuli futhi kufanele ubuyiselwe.
3. Isifihla-buso sonakele
4. Ngaphansi kwesimo sokuthi imaski nomnyango womsebenzisi uvalwe kahle, lapho umsebenzisi enuka iphunga lobuthi, isifihla-buso esisha akufanele sigqokwe okwesikhashana. Ngokombono wesakhiwo somzimba womuntu, ukujikeleza kwegazi le-mucosa yamakhala kunamandla kakhulu.
imaski yokuhlinzwa okwenza umshini, kuhlinzwa ubuso imaski ukwenza umshini, non nokwelukiweyo ubuso imaski ukwenza umshini, hose clamping umshini, non nokwelukiweyo imaski ukwenza umshini, umshini wesifihli sobuso,